ကျနော်တို့တုံ့ပြန်ချက်တွေအများကြီးမျှော်လင့်! | Papernerds
ယခုအသစ်: အမိန့်ကိုချပြီးနောက်စာရေးဆရာများဆွေးနွေးမှု။ ရည်မှန်းချက် - စံနမူနာယူစရာအရည်အသွေး။ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အရည်အသွေးအလယ်အလတ်အဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
စျေးနှုန်းများ ဌာနများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
စျေးနှုန်းများ ယခုမှာလိုက်ပါ! ဌာနများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Susanna Langner	18 / 06 / 2021 အိမ်အလုပ်
ကံမကောင်းစွာပဲပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အိမ်အလုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် အဲဒီနောက် Papernerds.de ကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာရှာခဲ့တယ်
အရမ်းကောင်းတဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေ၊ ဝန်ကိုငါ့ပခုံးပေါ်ကနေဖယ်ထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးနေ့မတိုင်မီ ၃ ရက်မှာအလုပ်ရခဲ့တယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါအဆက်အသွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အကြား၌ငါ့အလုပ်ဘယ်လောက်ဝေးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရတယ်။ သငျသညျနောက်ဆုံးစက္ကန့်မှာငါ့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။
မက်ဒေါ်နယ်	01 / 06 / 2021
ပညာရှင် Hans	23 / 05 / 2021 ဘွဲ့စာတမ်း
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခု၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးဖြစ်ဖို့မစဉ်းစားခဲ့ဘူး အပြည့်အဝ format လုပ်ထားတဲ့အရာများ၊ ပေးထားတဲ့ရင်းမြစ်များ၊ မှန်ကန်သောကိုးကားချက်များအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ဖုံးအုပ်ထားသည့်စာလုံးများပင်ပါဝင်သည်။
ဗီရီနာ	23 / 05 / 2021 စာတမ်းကျွမ်းကျင်
rob123	12 / 05 / 2021
နောက်ဆုံးတော့ဆင်းရဲတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုထုတ်မပေးနိုင်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခု
တွမ်	11 / 05 / 2021
Papernerds သည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအကူအညီကိုအတိအကျပေးသည်။ ငါအားကိုးလို့ရတယ်၊ အဲဒါဟာငါ့အတွက်အရမ်းအရေးကြီးတယ်
Florian	22 / 04 / 2021 အိမ်အလုပ်
ငါကြီးမြတ်ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ပြုသောအမှုသုံးခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကအလုပ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေပါ။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းများလည်းဒီမှာလုပ်ခဲ့ကြ
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0 မက်ဆေ့ခ်ျကို *
© 2000 - 2021, Papernerds.de မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
ယခုအသစ်စက်စက်။ ။ မှာပြီးသည်နှင့်အော်ဒါမှာကြားပြီးပါကအော်ဒါမှာကြားပြီးပါပြီ။ သင်၏စာရေးသူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး တို့နှင့်ချက်ချင်းပင်သင့်အားစံနမူနာပြအရည်အသွေးကိုပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည်အလယ်အလတ်အရည်အသွေးအဆင့်မှအခမဲ့တစ်စာမျက်နှာလျှင်စျေးနှုန်းတွင်ပါဝင်သည်။
အောင်မြင်မှုတိုင်းတာခြင်း၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ MailChimp၊ Mailerlite အသုံးပြုခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်သင်၏ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းအခွင့်အရေးများအပါအ ၀ င်သဘောတူညီချက်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးကြေငြာချက်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။